I-Global Biodegradable Paper kanye nePulasitiki Ephakeji Imakethe 2019-2026 Ngokuhlukaniswa: Kususelwa Kumkhiqizo, Isicelo Nesifunda | IHaishu
Ngokusho kweDatha Bridge Market Research imakethi yemikhiqizo enokubopha amaphepha nezimboni zepulasitiki incike ngqo ekuqhakazisweni komphakathi nakubathengi. Ukuthambekela kokujwayelana okuzuzisayo mayelana nezimpahla ezinqobayo kuthinta ukukhula kwebhizinisi emhlabeni wonke. Lokhu okufakwayo kwamukele intuthuko evumayo ngezindlela zokuqinisa ukukhipha ukusetshenziswa kwepulasitiki okukodwa. Isakhiwo esinezindleko eziphakeme embonini yokufaka kanye nokusetshenziswa okunyukayo kwezinto eziphilayo nezinhlobo zezinto eziphilayo kunganciphisa ukukhula kwemakethe kuwindi lesikhathi esibikezelwe.
Manje umbuzo uthi yiziphi ezinye izifunda ezibalulekile ezimakethe okufanele zibhekise kuzo? Idatha yemakethi yeDatha Bridge iye yabikezela ukukhula okukhulu eNyakatho Melika naseYurophu ngesisekelo sokunyuka kokusetshenziswa kwezimpahla ezigcwele nokwazi kwezici zobungani bezemvelo ngaphezulu kwephepha elingonakalisi nelipulasitiki
Ukufakwa ephepheni kwe-Biodegradable & ukufakwa kwepulasitiki kungumkhiqizo ohlanganiswe futhi ungadedeli noma yiliphi ikhabhoni ngesikhathi senqubo yokwenza. Isidingo sokufakelwa iphepha nokufakwa kwepulasitiki siyakhula ngenxa yokuqashelwa okukhulayo phakathi kwabantu okuhlobene nokufakelwa kwe-ecof Friendly futhi kusebenza kwizimboni ezinhlobonhlobo ezifana nezemithi, ukudla, ezempilo kanye nezemvelo. Umkhakha wokudla neziphuzo uncike kakhulu ezintweni zokupakisha usebenzisa izinhlobo ezahlukahlukene zamapulasitiki.
Kubhekwa njengokuqukethwe okunembe kakhulu futhi okuzuzisa ukuphepha kwemikhiqizo yokudla. Abantu sebeqalile ukusetshenziswa kwezinto zokufaka izinto ezingaphetheki emzimbeni lapho bephethe izinto zokudla. Ngakho-ke, isidingo semakethe yokufakelwa ephepheni & emaphepheni epulasitiki siyakhula. Imakethe yokufakelwa kwephepha elenziwa kabusha emhlabeni wonke kulindeleke ukuthi ibhalise i-CAGR enempilo engu-9.1% esikhathini sokubikezela sika-2019 kuya ku-2026.